Iindaba - Iindidi ezi-4 zezibane zokuKhwela
1. Ukuba ayisiyonto eyonwabisayo, ipali yokukhanya ayinangqondo
Ukunyaniseka, isibane sezinyuko sinokufana nokukhanya kwendlela. Sisibane sokuqala embalini ukuba sisetyenziswe njengoyilo lokucinga, kuba izinyuko ebusuku kufuneka zibe nezibane, kungenjalo kulula ukuwa, akunjalo?
Eli nyathelo lelitye lakhiwa phakathi kuka-1875 no-1889. Kukho izibane zerhasi ezitalatweni ezine kwizitepsi zamatye okukhanyisa amanyathelo. Olu hlobo lwezibane zezitrato ezintle ngoku azisekho kwezinye iindawo eHongKong. Kuthiwa izibane zerhasi ezitratweni kwezinye iindawo eHongKong ziye zatshintshwa ngokuthe ngcembe izibane zombane kwihlabathi lesi-5 neli-1960 zehlabathi ezingasentla. Zine kuphela ezi zisaphethwe kwiSithili esiMbindi esiphumelelayo saseHongKong Island.
Ifoto: Inokubekwa enye yezinyuko ezidumileyo emhlabeni: amanyathelo eDuddell Street kwiCentral, eHongKong. Baye baba yindawo ebalulekileyo yemiboniso bhanyabhanya kunye nomdlalo weTV amaxesha amaninzi.
Kwangelo xesha, kukho izibane ezimbalwa ezaziwayo kwizitepsi, izibane kuphela ezisasetyenziswayo eHongKong - izibane zerhasi. Izitrato zesitalato i-Duddell ebusuku, amanyathelo aphantsi kwezibane ayahamba ngokuthandwa kwezibane zegesi.
Umbuzo ngulo, ukuba ayizizo ezo izibane zegesi zakudala ezisetyenziselwe amakhulu eminyaka, kodwa izibane zendlela ezihamba ngepali ephantsi, ngaba ezi zibonda zokukhanya ziya kuhlala zidume kangaka?
Izinyuko zokubambelela ziyasetyenziswa njengezixhobo ezincedisayo kwizinyuko kwaye zisetyenziswa kakhulu kubomi bethu. Iimbambo zokubamba zantlandlolo zidlala kuphela umsebenzi wokuhombisa kunye nokhuselo, kwaye eneneni zahlukile ngokupheleleyo kwimisebenzi yokukhanyisa.
2. Ukuphuculwa koyilo lwezibane kunye nezibane kwenza ukuba kube nokwenzeka ukususa ipali yokukhanya engenancasa.
I-handrail eqhelekileyo yindawo yokugcina izinto okanye ukuthembela okukhuselekileyo ukunceda abantu ukuba bahambe, kwaye uguquko oluncinci yindawo yokuhlala elula.
Xa i-handrail iba kukukhanya okuthumela ukukhanya kwaye kukhanye kwizitepsi, amanyathelo anoluvo lwendawo. Ngobumba, ukubaluleka kokwazisa izinto ezikhanyayo kuyacaca. Ngeli xesha, i-handrail iba ngumfanekiso ongasemva. Nangona kwakusetyenziswa izibane eziqhelekileyo ezibengezelayo, ngenxa yoko, kwakusafuneka ndincome ukuphuculwa kwendalo ngumtsalane wokukhanya nobumnyama obenziwe kukukhanya.
Oku kulandelayo kwazisa iindlela ezininzi eziphambili zokusombulula inyathelo ukukhanyisa. Ngokombono wophuhliso lobuchwephesha, inokuqondwa njengembali yokuvela ebusuku kwizinyuko:
A. Icala lokukhanya komhlaba
Izinto eziluncedo: ukukhanya okuhle kunye nefuthe lesithunzi;
Iingxaki: ukukhanya okuphantsi, ukukhanya okulula;
Iindawo ezifanelekileyo: abantu abancinci kunye nesidingo sobumnyama, ezinje ngeevenkile zekofu, iivenkile zokutyela zasentshona kunye neeklabhu zabucala, njl.
Ezibane ze-Eurborn zangaphakathi I-GL116SQ, I-GL119, GL129 zilungele ezi ndawo.
B. Imivalo yokukhanya ifakwe ngaphakathi kwizinyuko
Izinto eziluncedo: ukusebenza kakuhle komhlaba, ifuthe elibonakalayo lokujonga;
Ukungancedi: akukho kusasazwa kokukhanya, kunzima ukuyifaka;
Iindawo ezifanelekileyo: ukhenketho, iindawo zokuzonwabisa, njl.
C. Iitreyini ezinobungcali kunye nezibane zecrafti
Izinto eziluncedo: intle, ikhuselekile, ulwabiwo olulungileyo lokukhanya;
Ukungancedi: ixabiso eliphezulu, elingaqhelekanga, kufuneka lenziwe ngokobungakanani bombhobho wensimbi.
D. Ibhanti elikhanyayo phantsi kwesihlalo seengalo
Izinto eziluncedo: zilula, zitshiphu.
Ukungancedi: ayintle, ayikhuselekanga, ayikhanyisi ngendlela;
Iindawo ezifanelekileyo: Iindawo zoluntu ezineemfuno eziphantsi, njl.
Ukongeza kwizitepsi ezisetyenziswa ngokubanzi, izibane zetrafikhi zinokusetyenziselwa ukukhanya kweGadi, ukukhanya kweNdawo, ukuKhanyisa kwabahambi ngeenyawo njalo njalo.
Inikezela ngemizekelo emininzi yesicelo esivela kwindawo yokuqala, ukusukela kwangoko ngokubeka iityhubhu ezibengezelayo kwindawo yokubamba iingalo, kwimivalo yokukhanya okunzima nakwimicu yokukhanya ethambileyo. Ngapha koko, uyilo lwendawo yokukhanyisa esekwe kwindawo ebonakalayo ibiphucula ngokungadinwa, ke ziziphi iimpawu ekufuneka zibe nazo ukukhanya kwesibambiso sokugcina isandla?
1. Uyilo oluhlanganisiweyo lwendawo yokugcina izinto kunye nezibane, indibaniselwano efanelekileyo yomsebenzi wokukhanyisa kunye nomhlaba wokugcina;
2.Uyilo lokukhanya okuncinci, ukukhanya kwesibane, okulula ukufaka;
3. Uyilo olusengqiqweni nolusebenzayo lokusasaza ubushushu ukuqinisekisa ubomi benkonzo yokukhanya;
Ukulungiselela uyilo lolwakhiwo kunye nezinto zokutywina, kwaye inqanaba lokhuseleko lingaphezulu kwe-IP65;
5. Izinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo, zombini iiprofayili zentsimbi kunye nealuminium zinokusetyenziswa;
6. Umphezulu unganyangwa ngombala wendalo wezinto okanye ukutshiza nge-electrostatic okanye unyango lwe-oxidation ukuhlangabezana neemfuno zemibala eyahlukeneyo kunye nemisebenzi;
7. Izinto zePC zesibane siqinisekisa ukuhanjiswa kokukhanya, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukumelana nokuguga, kwaye akukho kuqhekeka;
8. Ukwahlula-hlula kokuyilwa kokudityaniswa kokukhanya kungasombulula ukukhanya kwendlela enobubanzi beemitha ezi-2 ukuya kwezi-8;
Sombulula umsebenzi wokukhanyisa ngelixa uthintela ukuqaqamba;
10. Iindawo ezizodwa zifuna ukukhanya kokukhanya kombala, umbala omnye okanye utshintsho olunemibala;
11. Ukukhuselwa kukothuka ngombane: Udidi III;
12. Ukuthobela imilinganiselo ye-GB yesizwe yombane.